I-Cascade Hollow, A Historic Cedar Lodge Est 1959
Siyakwamukela ku-Cascade Hollow Lodge!!
Ukuhlala okuphelele kwemindeni, amaqembu, nezindawo zokuhoxa !!
Eduze naseTullahoma, eShelbyville, eLynchburg, eManchester, eBell Buckle, eTennessee.
I-Cascade Hollow Lodge inikezela ngendawo yokuhlala ejabulisayo endaweni ezolile, ethokomele.
ILINGANISO ELIKHONSIWE LELWENDO EGCWELE, WONKE AMAGUMU AYISIKHOMBISA.
Iqembu elincane? Sinamalungiselelo avumelana nezimo! Bheka uhlu lwethu, i-CHL Hollow Hideaway, i-CHL Small Group Getaway, noma ubheke amagumbi ethu ngamanye, Igumbi Legolide, Igumbi LasePueblo, Igumbi Logogo, Igumbi Lodade.
I-Cascade Hollow Lodge inamagumbi ezivakashi angu-7. Yindawo enhle yamaqembu amancane kanye/noma imibuthano yomndeni isb. ukuhlangana, ukuhoxa, amaqembu okufunda, ukugujwa kwezinsuku zokuzalwa, indawo yokulala yemindeni engaphandle kwedolobha ehambele imishado, imingcwabo kanye nokuthweswa iziqu.
Izivakashi zethu eCascade Hollow Lodge zamukelekile ukuthi zijabulele amagumbi okuhlala ahlukene amane nezindawo zokudlela ezintathu ezihlukene ... indawo enkulu, eyikhaya. I-Lodge 'yayiyindlu yepulazi' yokuqala ye-Cascade Hollow Farm enamahektha angu-185 endaweni enokuthula yasemakhaya ezungezwe amagquma aphakeme nemifudlana yamanzi ahlanzekile egeleza emgodini.
Sivumela izivakashi zethu ukuthi zibeke ijubane lokusebenzelana. Singabantu abanobungane kodwa futhi siyathanda ukuhlonipha isifiso sezivakashi sokuba sodwa nokuba ngasese. Izakhiwo zethu zivulekile kangangokuthi kuhlala kunendawo yokuba izivakashi zisakazeke futhi zithole indawo ethule.
I-Cascade Hollow iyisigodi esincane esinamagquma futhi esinemifudlana ... i-Cascade Hollow Road iwuhambo olujabulisayo noluphephile emfudlaneni. I-1/3 yekhilomitha nje ukusuka ekungeneni kwendawo yokulala yindawo yesizinda Sokubhaliswa Komlando Kazwelonke - iGeorge Dickel Distillery (imbangi enkulu kaMnu. Jack) eheha ukuvakashelwa komhlaba wonke minyaka yonke. Kukhona ukuvakasha usuku ngalunye ... ukubhuka okuphakanyisiwe.
Azikho izinto zokuhamba zomphakathi kule ndawo. Imoto, iveni, isithuthuthu noma ibhayisikili kuyisidingo kakhulu sokungena nokuphuma emgodini wethu. Kungamakhilomitha amahlanu ukusuka esikhumulweni sezindiza saseTullahoma kanti iGreyhound igijima nale ndawo nayo. Sisemakhaya kodwa (nakuba singamakhilomitha amahlanu kuphela ukusuka e-Kroger naseRuby Tuesdays).
Izinsiza zethu ziboleka ezindaweni eziyimfihlo, ezothando kanye nokuhlangana kwemindeni emikhulu. Sesineminyaka engu-11 sisebenza futhi samukele abantu abaningi kanye nezinga lezenhlalo lezivakashi. Ngeke singabaze nakancane nganoma yisiphi isivakashi ukuthi sikhulume ngokuvakasha kwaso lapha ... siyaziqhenya ngokuba nerekhodi elihle lokunikeza umoya wokungenisa izihambi owanelisayo nojabulisayo.
I-Cascade Hollow "isigodi" esinomfudlana ogeleza phakathi kwaso ... cishe amamayela amathathu ubude nezindawo zasemaphandleni ezinhle futhi ezinhle. Amagquma aphakama kuzo zonke izinhlangothi zomgwaqo omkhulu. Omunye womakhelwane bethu udume kakhulu: I-George Dickel Distillery yomlando eyi-1/3 mile ukusuka ekhaya lethu. Imayela elilodwa kolunye uhlangothi kuyidolobhana eliphansi laseNormandy ... ikhaya le-Normandy TVA dam nechibi. Yonke indawo iseningizimu emaphakathi ne-Tennessee ... indawo yasemaphandleni ehamba phambili ... inhle kakhulu.
Cascade Hollow Distillery, Normandy Lake, Duck River Kayaking, Old Stone Fort Archealogical Park, Rutledge Falls State Park, Beechcraft Air Museum, Jack Daniels Distillery, Tennessee Whisky Trail, Tenneessee Walking Horse Celebration, Shelbyville, Manchester, Tullahoma, Wartrace Area Horse Show
Sivumela izivakashi zethu ukuthi zibeke ithoni yokusebenzelana. Sobabili singabantu abanobudlelwane futhi sizimisele ukuzibandakanya nokuphendula imibuzo mayelana nendawo kanye nendawo ezungezile namasayithi, izindawo zokudlela, njll. Nokho, uma isivakashi sethu sifuna ubumfihlo obuphelele, sizokwenza konke okusemandleni ethu ukufeza isifiso saso. Ngokuvamile, uma amaqembu esezinzile siyahwamuka futhi sitholakale ngocingo noma ngombhalo uma kudingeka.
Sivumela izivakashi zethu ukuthi zibeke ithoni yokusebenzelana. Sobabili singabantu abanobudlelwane futhi sizimisele ukuzibandakanya nokuphendula imibuzo mayelana nendawo kanye nen…